Baby_Bright_Caviar_ ::: 365myanmar.com
ပင်မစာမျက်နှာ Body Lotion Baby Bright Caviar & Ginseng Body Lotion
Baby Bright Caviar & Ginseng Body Lotion
☑️ အသားရေ တင်းရင်းစေခြင်း
☑️ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် မှ ကာကွယ်ပေးခြင်း
☑️ အသားရေ တငျးရငျးစခွေငျး
☑️ ခရမျးလှနျရောငျခွညျ မှ ကာကှယျပေးခွငျး
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် : 1000 g
750 mL 150 mL
Baby Bright Tok Tok Collagen Brightening Body Bo
Body Lotions & Arbutin Seaweed Body Booster
အရေးကြောင်းများနှင့် free redical များကိုလျော့ချပေးခြင်း
Ready2White Whitener Milk Dress Cream Pack 6ml
Yves Rocher Body Milk So Elixir Relift (66318)
- အသားအရေကို စိုပြေစေခြင်း
Yves Rocher Silky Body Lotion YVS-63370- Malaysi
အသားအရေကိုနူးညံ့စေပြီး ရေဓာတ်ကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းပေးနိုင်ခြင်း
ငါးဥရဲ့ အဆီအနှစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ Baby Bright Body Lotion လေးဟာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ အသားရေကို အရေတွန့် ခြင်း အမဲစက်များထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် ကိုးရီးယား ဂျင်စင်း ပါဝင်ပေါင်းစပ်ထားတာကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာမှ ဆဲလ် အသေများကိုပါ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ပန်းရနံ့ သင်းသင်းလေးနဲ့ပါ တွဲထားတာမို့ သင့်တနေ့ တာ လန်းဆန်းနေစေဖို့ Baby Bright Caviar & Ginseng Body Lotion လေးမှ တာဝန်ယူပါရစေလား....
ငါးဥရဲ့ အဆီအနှဈဖွငျ့ ပွုလုပျထားတဲ့ Baby Bright Body Lotion လေးဟာ သငျ့ရဲ့ ကိုယျခန်ဓာ အသားရကေို အရတှေနျ့ ခွငျး အမဲစကျမြားထှကျခွငျးမှ ကာကှယျပေးနိုငျတဲ့အပွငျ ကိုးရီးယား ဂငျြစငျး ပါဝငျပေါငျးစပျထားတာကွောငျ့ ကိုယျခန်ဓာမှ ဆဲလျ အသမြေားကိုပါ ဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။ ပနျးရနံ့ သငျးသငျးလေးနဲ့ပါ တှဲထားတာမို့ သငျ့တနေ့ တာ လနျးဆနျးနစေဖေို့ Baby Bright Caviar & Ginseng Body Lotion လေးမှ တာဝနျယူပါရစလေား....
Copyright © 2021 365myanmar.com. All rights Reserved.